By soniya on	 23rd January 2020 Highlights, अन्तर्वार्ता, नेपाली, समाचार
बिपिन कार्कीलाई नेपालमा मेथड अभिनयको एउटा अब्बल उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । उनी अभिनित अधिकांश फिल्मलाई समिक्षक र दर्शकले रुचाएका छन् । उनी अभिनित फिल्म ‘सेल्फी किङ’ आगामी माघ २४ गते रिलिज हुँदैछ । उनीसँग गरिएको संक्षिप्त संवाद :
‘सेल्फी किङ’ले तपाइँलाई कति कन्भिन्स गरेको छ ?
मसँग आएका स्क्रिप्टमा मैले गर्ने फिल्म निर्भर रहन्छ । मलाई निश्चित एउटै जनरमा काम गर्ने भन्ने मात्र हैन । यस्तै खाले स्क्रिप्ट आइरहेको छ । सेल्फी किङले मलाई कन्भिन्स गरेकै हो । यस्तो किसिमको स्क्रिप्ट आइदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
मुख्य पात्र कति सशक्त छ यसमा ? समाजका वास्तविक पात्रको कति नजिक छ फिल्म ?
शक्तिशाली नै महसुस गरेको हुँ मैले । हरेक फिल्ममा समाजबाट टिपेका पात्र हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो पनि समाजकै पात्र हो । हेर्दा फिल हुन्छ । हामीले यसलाई सिनेम्याटिक वेबाट पनि लगेका छौ । शतप्रतिशत वास्तविक पनि हैन । अग्र्यानिक पात्रको रुपमा दर्शकले महसुस गर्नुहुन्छ ।
पात्रको भूमिकामा डुब्नको लागि तपाइँले आफूलाई कति मानसिक र शारीरिक रुपान्तरण गर्नुभयो ?
फिल्मको बाउन्ड्री थाहा पाउन केही समय स्क्रिप्ट पढ्ने गर्छु । पढ्दै जाँदा विस्तारै ट्रान्सफर्म गर्दै जाने हो ।
हलिउड फिल्म जोकरबाट फिल्म प्रभावित भएको भन्ने भनाइलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हाम्रो समाजमा भेटिने चंखेको रुपमा म जोकरलाई अनुवाद गर्न खोज्छु । यो भनेको एउटा पेशा हो । समाज विश्वव्यापी एउटै त हो । तिनै पात्र लिने हो हामीले । मानौं मैले यसमा डाक्टरको रोल गरेको छु । डाक्टर त हलिउड, बलिउडमा पनि छ नि । मैले यसमा जे गरेको छु, त्यो टेलिचलचित्र क्षेत्रलाई व्यंग्य पनि हो । मेकअप र गेटअपबाट जबर्जस्ती हँसाउने काम मेरो पात्रले गर्छ ।
नेपाली अभिनयको सेटब्याक के देख्नुहुन्छ ?
अभिनय क्षेत्रले क्रमशः फड्को मार्दैछ । गर्दै जाँदा एड्भान्स हुँदै जाने हो । म नभएपनि पछिल्लो पुस्ताले अभिनयलाई लिएर गम्भिररुपमा सोच्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।